Anisan’ny mijery akaiky ireny ny polisim-pirenena. Tranga fakana an-keriny miisa 14 no niseho teto amintsika hatramin’ny volana janoary no ho mankaty. Olona 14 isa no efa voasambotra hatreto raha roa monja no nahazo fahafahana vonjimaika. Miisa 132 kosa ireo fikambanan-jiolahy rava raha miisa 110 ireo olona voasambotra ary ny 89 tamin’ireo dia naiditra am-ponja avokoa. Ho an’ireo jiolahy rain-dahiny indray dia 435 no voasambotra, 23 ireo lavo teo am-panatanterahana ny asa ratsiny raha nampidirina am-ponja avokoa ny ambiny. Miisa 55 moa ireo basy tratra tany amin’ireo olon-dratsy ka ny 24 dia PA avokoa, ny iray revolver, 21 isa fusils de chasse ary ny valo ambiny “armes de fabrication artisanale” niampy mas 36 iray sy bala 336. Hitohy hatrany ny ezaka hiantsorohan’ny polisim-pirenena raha ny vaovao azo omaly. Tsy ho diso anjara amin’izany ny ady amin’ny kolikoly izay tsy hisy fandeferana intsony ho an’izay tratra, hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Toraka izany koa ny fanaraha-maso ireo polisy tsy manara-dalàna, ny fandrindrana ny famindran-toerana… Fantatra fa mbola manana olana arak’olona sy ara-pitaovana izy ireo. Raha polisy telo misahana olona 1.000, ohatra ho an’ny fenitra iraisam-pirenena dia mbola lavitra izany ny eto amintsika izay nanaovan’izy ireo fangatahana manokana.